Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Rob Holding Childhood Plus Story
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye amara aha ya "Rob". Anyị Rob Holding Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye nchebe zuru oke. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Rob Holding's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Rob Holding Childhood Akụkọ - Ndụ Mbido:
A mụrụ Robert Samuel Holding n'ụbọchị 20th nke Septemba 1995 nna ya (onye ọchịagha) na nne (onye na -elekọta ụlọ) na Tameside, Greater Manchester, United Kingdom.
Amụrụ na Manchester mere ezinụlọ Rob Holding ndị niile na -akwado United nke na -achị obodo n'oge ahụ.
Rob Holding tolitere na nwanne ya nwanyị nke okenye na ezinụlọ ha na Stalybridge, Bolton obodo dị na Greater Manchester na North West England. Na mbido, ha abụọ gara ụlọ akwụkwọ West Hill na obodo ahụ.
Rob, n'adịghị ka nwanne ya nwanyị, agụghị agụmakwụkwọ ya n'ihi football. Nwanne ya nwanyị gara n'ihu inweta akara ugo mmụta Nna-ukwu (Chọta akwụkwọ ememme ngụsị akwụkwọ n'okpuru);
Mgbe Rob na -enwe ọganihu n'egwuregwu bọọlụ, nwanne ya nwanyị gara n'ihu na -ejide ọrụ nkuzi. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, nne na nna Rob nwere ezi uche n'ihe banyere nhọrọ ọrụ ya na mkpebi ịkwụsị ụlọ akwụkwọ.
Ma Rob na nwanne ya nwanyị na mbido kpebiri ịhapụ ndị mụrụ ha na ndị ọzọ ịchụso ọrụ ha.
Rob Holding Childhood Life - Life Career Ndụ:
Ọchịchọ Rob nwere maka ịgba bọọlụ hụrụ ya ka ọ debanyere aha ya na otu ndị ntorobịa mpaghara Bolton, nke nyere ya ogbo iji gosipụta talent ya.
Dabere na Football London, a kọwara ya dị ka nwata dị umeala n'obi na otuto na -esite na nzụlite ezinụlọ ya siri ike.
Ọ dịghị ihe ọ bụla mere ka ọ bụrụ ihe ziri ezi site n'oge ọ gbalịrị ime njem ya. Ná mmalite, Rob Holding so n'ime ndị ntorobịa ole na ole bụ ndị kpebisiri ike ịchụ nrọ ya.
Rob Holding Bio - Mgbe Ihe Na-aga Siri Ike:
Otú ọ dị, n'agbanyeghị ọtụtụ itinye uche na nlebara anya, ihe anaghị aga dịka e mere atụmatụ mgbe a kwalitere ya ka ọ bụrụ football.
At ụfọdụ oge n'oge ọ dị afọ iri na ụma, enwere ụjọ na ọdịnihu Rob na Bolton ejighị n'aka na a na-atụ anya na ụlọ ọrụ ahụ ga-ahapụ ya n'ihi enweghị ụdị mgbe niile.
Nke a bụ oge Rob weere ịhapụ egwuregwu ahụ kpam kpam n'ihi nkụda mmụọ n'enweghị ọganihu. Kama ịtọhapụ ya, ụlọ ọrụ ya kpebiri ịkwalite ya n'ogologo ha ma bufee ya n'ụlọnga.
Ọbụlagodi mgbe mbinye ego na Bury, Rob Holding nwere nkụda mmụọ karịa maka arụmọrụ ya. Mgbazinye ego ọnwa atọ na Bury na njedebe nke oge 2014/15 nyere naanị nkeji iri na otu na egwuregwu.
Kama ịgba bọl, e kenyere ya ụfọdụ ọrụ na-apụ apụ nke mere ka ọ daa mbà n'obi.
Rob Holding Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ịlaghachi site na mbinye ego n'oge ekeresimesi, Rob Holding onye egwuregwu bọọlụ nwere nkụda mmụọ hụrụ nnukwu ihe Bolton nne na nna ya na -enye ya.
Kama ịtọhapụ ya ma ọ bụ hụ ya ka ọ na -akwụsị ịgba bọọlụ, Neil Lennon, onye bụbu onye nkuzi Bolton Wanderers nyere Rob ohere ikpeazụ ya na mpụta mbụ ya na Bolton.
Ijide mgbanwe n'oge egwuregwu a bụ ihe pụrụ iche. O gosipụtara ntozu oke ma gbanwee ụdị egwu ya, oge a bụrụ onye na-eche echiche nchekwa.
Mgbe ọ laghachiri n'òtù ahụ, ọ masịrị ya ugboro ugboro ka akụkụ ya na-alụ ọgụ mmeri megide relegation. Rob gara n'ihu na-atụle ihe mgbaru ọsọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ya.
Rob Holding Bio - Rise to Fame Akụkọ nke:
Mgbe ndị otu ya na -agbasi mbọ ike, njigide na ntozu oke nke Holding pụtara. Ndị maara ya nke ọma kwuru mgbanwe ya na njikọta nke ịrụsi ọrụ ike, mmepe anụ ahụ na inwekwu ntụkwasị obi.
N'ịbụ onye sitere n'ezinụlọ nwere nzụlite ndị agha, ịrụsi ọrụ ike na ịdọ aka ná ntị abụtụbeghịrị Rob okwu. Ọ dị ka ọ na -eme nke ọma na -egwu egwu na -enweghị nrụgide ọbụlagodi mgbe enyere ya ọrụ ndị ọzọ.
Rob Holding mechara nweta mmeri nke Bolton nke Onyinye Afọ n'agbanyeghị na ọ na-egwu egwu ọkara oge mgbe ọ gbaghachitere ya.
Mgbe ọ dị afọ 18, Rob emebeghị nke ọma n'ụzọ anụ ahụ. Ọ ghaghị ịrụsi ọrụ ike na mgbatị ahụ.
Nke a bụ oge ndị Arsenal na -enyocha ya ugbu a bụ ndị mere njem na ya na njedebe nke oge 2015/2016.
Otu n'oge ahụ, England Under-21 njikwa Gareth Southgate nwekwara obi ụtọ ma kpọọ Rob n'ime ndị agha ya maka asọmpi Toulon.
Oku a England a na - eju anya ga - akwado onye ma ijide ka ọ ghara itinye aka na ndị England ọ bụla. N'ụzọ dị ịtụnanya, Rob Holden na ndị otu ya meriri asọmpi Toulon.
Ndụ na Arsenal: N'ịbụ ndị na-egwuri egwu na Toulon, ejidewo nso na Ụlọ ndị dị na Arsenal. Jack Wilshere were ya n'okpuru nku ya n'ihi na ya na Bolton.
Arsene Wenger weere ya dịka nwa ya, ọbụnakwa gwa ya otú ọ ga-esi gụọ egwuregwu ahụ nke ọma dị ka onye na-agbachitere ya.
Rob Holding mere ngwa ngwa gosi onwe ya dịka akụkụ dị mkpa nke nchekwa Arsenal. Mgbe ọtụtụ ndụmọdụ gasịrị, ọ na -adọrọ mmasị Arsene Wenger ya na isi ya na-eme ihe na bọl ahụ na mberede na mbido megide Liverpool.
N'ikpeazụ, nke ụmụ nwoke dị jụụ si n'obodo nta dị na Stalybridge sonyeere Arsenal ka ha mee ememme 2016-2017 FA na FA Shield Shield.
Rob Holding Life Life
Ọ bụghị ndị na-eto eto ọ bụla na-eto eto ma Rob Holding bụ ihe atụ zuru oke nke eziokwu a. Ọ bụ ugbu a BAE-obere na ugbu a na-efu site na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị (dị ka n'oge ederede).
Rob Holding emeela ka ọ dịrị ndụ nke ọma mgbe ọ na-arụ ọrụ ya.
O siri ike ịchọpụta ma onye na-akwado Bekee nwere enyi nwanyị ma ọ bụ. Rob na-egosipụtakarị na ihe omume ọha na eze nanị ya ma ọ bụ ndị enyi ya. Ọ na-ezo site na mgbasa ozi na ihe nzuzo.
Rob Na-ejide Ndụ Nke Onwe:
Tomata ndụ onwe onye nke Rob Holding ga - eme ka ị nweta nkọwa zuru ezu banyere ya. Rob site na okike ya na nnabata ya bụ nwoke dị umeala n'obi nke na-enwetụbeghị ụdị agụụ na ndụ ya.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ na-enwe obi ụtọ na ezumike na Miami ma ọ bụ Ibiza, ijide ka o nwere ọtụtụ ihe ụtọ ụwa.
Ị maara?… Onye na-agbachitere ahụ ga-enwe mmasị inwe ezumike ya na osimiri Thailand dị ka ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa.
Kpọọ Onye Ọrụ Ụgwọ Ọrụ: dị nnọọ ka Hector Bellerin, Rob weere onwe ya ka ọ bụrụ onye omekorị nke onye mbụ na-agba shooter video egwuregwu Oku ọrụ. Ọ na-esonye na Kpọọ nke Agha Agha Ụwa nke Abụọ BETA.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Rob Holding Childhood nke akụkọ gbasara eziokwu. Na LifeBogger, anyị na -agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.